Guddoomiye Thaabit Cabdi oo ku guuleystay inuu dib u furo waddo muhiim ah (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiye Thaabit Cabdi oo ku guuleystay inuu dib u furo waddo muhiim ah (SAWIRO)
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa ku guuleystay inuu furo waddo muhiim ah oo in muddo ah u xirnayd nadaafad darro, islamar ahaantaana ay hore isaga indho tireen ganacsatadda iyo maamuladii hore.
Guddoomiye Thaabit oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah oo aad u weyn ay u leedahay furitaanka waddadaasi, islamarkaana ay muddo sanado badan kadib ku guuleysteen inay dib u furaan.
Wuxuu guddoomiye Thaabit ugu baaqay ganacsatada ku ganacsata hareeraha waddadaasi inaysan qashinka ku daadin goobahaasi, maadaama la doonayo in billicdeeda lasoo celiyo.
Dhinaca kale, guddoomiye Thaabit ayaa kula dar-daarmay ganacsatada suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, inay ka qeyb qaataan nadaafada suuqa Bakaaraha, islamarkaana maamulka gobolka kala shaqeeyaan sidii suuqa loo hormarin lahaa.
Sawiro laga soo qaaday wadadaan ayaa muujineysa inay aheyd mid qashin u xiran iyo biyo wasaq ah oo fadhiyay i muddo ah, iyadoona dhaqaatiirta Muqdisho ay horey uga digeen cuduro ka dhasha qashinkii dhoobnaa wadadaas.
Dhinaca kale, maamulka uu hoggaaminayo guddoomiye Thaabit Cabdi Maxamed ayaa haatan u muuqda mid waqti badan gelinaya billicdda magaalada Muqdisho, iyagoo ka jawaabaya soo jeedinta bulshadiisa.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii guddoomiye Thaabit Cabdi Maxamed uu baldoosaro iyo gaadiid kale geliyay waddada Cirtoogte oo isku xirta Isgoysyada Bakaaraha iyo Black Sea ee magaalada Muqdisho.